समुन्द्र किनारमा भेटिएको श’वको वास्तविकता यस्तो ? – Sanjal Nepal
Homeसमाचारसमुन्द्र किनारमा भेटिएको श’वको वास्तविकता यस्तो ?
समुन्द्र किनारमा भेटिएको श’वको वास्तविकता यस्तो ?
December 8, 2020 admin समाचार 1037
समुन्द्र किनारमा अनेक प्रकारका जीवजन्तु रहने गर्दछन् । कतिपय अवस्थामा यी जीवजन्तु देखेर मानिस अचम्भित हुन्छन् । तर हालैमा सामाजिक सञ्जालमा समुन्द्र किनारमा एक अनौठो चिज फेला पर्यो । जो ठ्याक्कै मानिसको लाश झै देखिन्छ ।
समुन्द्र किनारका एक महिलाले डेड बडि (लाश) देखेको भन्दै प्रहरीलाई फोन गरी बोलाइन् । तर प्रहरी आएपछि भने यस घटनामा अर्कै तथ्य देखियो ।
खासमा संयुक्त राज्य अमेरीकाको अलबामाको बाल्डविन काउन्टीमा सोल्जर क्रिक र पैलेट्टो क्रिकको मुहानबीच स्थित पेरिडो बीच (समुन्द्री किनार)मा ती महिलाले मानविय लाश झै वस्तु देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेकी थिइन् । तर प्रहरी आएपछि लाश झै देखिने उक्त वस्तु एक शिर बिनाको पुतला रहेको खुल्यो । जसमा समुन्द्रि फोहोर भरिएको थियो ।
November 2, 2020 admin समाचार 5567
December 26, 2020 admin समाचार 1348
December 22, 2020 admin समाचार 3198
LEX 18 agenda conversation: Job club (406882)